Ciyaaraha iyo Maansada - Waxaa dhiirigaliyay ciyaaraha
Ciyaaraha iyo gabayada
Waxaa dhiirigaliyay ciyaaraha
Podcast -ka Ciyaaraha & Maansada
Buugaagta elektaroonigga ah ee la daabacay
Beddel liiska hoose
AC / DC Live: Rock Band xirfad
Tababaraha kooxda xeeladaha
Alfred Digaag Ciyaaraha iyo gabayada
Saaxirad! Ciyaaraha iyo gabayada
Deja vu 2 Ciyaaraha iyo gabayada
Waa maxay hantida? Barnaamijyada ciyaarta
Jannada Ciyaaraha iyo gabayada
Posted on 15. May 2022 14. Febraayo 2022 By Claudia Wendt	No Comments ilaa The Varsav Game Studios
Varsav Game Studios waa studio la aasaasay 2016 oo ay ka shaqeeyaan 40 shaqaale ah. Waxay ku takhasustay horumarinta ciyaaraha oo ka soo jeedda aragti ka duwan - iyada oo diiradda saareysa makaanikada aan caadiga ahayn iyo jilayaasha ugu muhiimsan ee gaarka ah. Soosaarkii ugu horreeyay ee istuudiyaha, Bee Simulator, ayaa isla mar la sii daayay Noofambar 14, 2019 PC, PlayStation 4, Xbox One iyo Nintendo Switch…
Read More "Istuudiyaha Ciyaaraha Varsav" »
Xusuustii dib baa loo yidhi
Posted on 15. May 2022 By Claudia Wendt	No Comments Xusuus Dib Loo Sheegay
Xusuus Retold waxay dejinaysaa sheekada dagaalkii 11aad ee adduunka, kaas oo dhammaaday Noofambar 1918, XNUMX. Ciyaartu waa codsi nabadeed. Xasuuso Dib Loo Sheegay Dhawr askari ayaa isku dayaya inay naftooda ku farxaan iyagoo wata xoogaa muusik ah. Qof baa gitaarka garaacaya, inankii Hindiga ahaa ee shirkadda aad hadda la kulantayna wuu qoob-ka-cayaarayaa. Waxay u egtahay...
Read More "Xusuusta dib loo sheegay" »
Hard West 2: Siideynta 2022
Posted on 15. May 2022 15. May 2022 By Josefina Meloney	No Comments ilaa Hard West 2: Siidaynta 2022
Galbeedka duurjoogta waxay la kulmaan cabsi. Ciyaarta doorka-ciyaarista Hard West 2, tacaburro badan iyo kuwa kaa soo horjeeda ayaa ku sugaya, kuwaas oo aan had iyo jeer ahayn bini'aadam dabeecadda. Maqaalkan, waxaan kuu sheegaynaa waxa laga filayo taxanaha. Waxaad qaadanaysaa doorkii budhcadda Gin Carter, oo ah tuug khatar ah oo caan ah. Marka Gin uu ogaado in tareen cirfiid ah uu sido…
Read More "Hard West 2: Siideynta 2022" »
Ciyaaraha iyo gabayada, News
Posted on 14. May 2022 14. Febraayo 2022 By Claudia Wendt	No Comments Kacdoonka Giants
Kacdoonka Giants wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka baxsato maxaabiis ahaan sida weyn. Varsav Game Studios ayaa la yimid muuqaalka waxqabadka. Aargoosiga bini'aadamka Hadafkaaga weyn ahaan waa ka aargoosiga aadanaha. Waxay addoonsadeen Rafaa oo aad u weyn tahay aargoosigaaga. Waxaad ku tumanaysaan, burburinaysaan oo burburinaysaa kuwa yaryar oo cararaya. Waxaad burburisaa...
Read More "Kacdoon weyn" »
Posted on 13. May 2022 By Claudia Wendt	No Comments ku socda Adduunka waswaasiinta
Adduunka Whispered est un merveilleux jeu de conte de fées du développeur Daedalic.
Read More "Dunida la xanto" »
Asal ahaan la dhejiyay 2019-04-26 14:19:04.
Saldhigyada la Raray 4
Posted on 13. May 2022 11. Febraayo 2022 By Claudia Wendt	No Comments ilaa Saldhigyada la Raray 4
Saldhigyada raran 4 waa wax aan ka badnayn hirgelinta hagaajinta ee qaybta saddexaad. Waxa kale oo la daabacay isla sanadkaas qaybta saddexaad. Ciyaartu waa sharaftii saldhigyada lagu raray ciyaaraha ee loo sii daayay NES waxayna la timaadaa tiro horumar ah. Kubadda Koleyga Afraad - Saldhigyada lagu Raray 4 Saldhig 4 waa…
Read More "Saldhigyada raran 4" »
La shaqaynta Xog -hayaha Xusuusta
Posted on 13. May 2022 By Claudia Wendt	No Comments si aad ula shaqeyso Profiler-ka Xusuusta
Profiler-ka xusuusta waa xirmo cusub oo loogu talagalay Unity 2018.3 ama ka dib taasoo kuu ogolaaneysa inaad falanqeyso isticmaalka xusuusta ee mashruuca si aad u hesho daadinta xusuusta iyo kala daadsanaanta. Diidashada xusuusta waxay dhici kartaa marka xusuusta la qoondeeyo laakiin waligood lama meel dhigin si dib loogu isticmaalo ka dib marka xusuusta aan loo baahnayn. Casharradan, waxaad ku baran doontaa sida...
Read More "La shaqaynta Profiler Memory" »
Soo noqoshada weligeed ah - Badbaadinta Madoow
Posted on 13. May 2022 13. May 2022 By Claudia Wendt	No Comments Soo noqoshada weligeed ah - Badbaadinta Madoow
Soo noqoshada weligeed ah: Badbaadinta Madoow waa ciyaar royale dagaal oo leh saameyn MOBA ah oo xoog leh. Waxay ku dhisan tahay ciyaartii hore ee Immortal Soul: Badbaadinta Madoow ee horumariyaha Nimble Neuron. Aqoonta Hore ee Soo Noqoshada Daa'imka ah Ciyaartu waxay adeegsataa isla jilayaal, walxo, iyo goobo dib loogu habeeyey MOBA-da sare oo leh awoodo iyo tirooyin dheeraad ah. Waxa kale oo ay ku darsataa labada nooc iyo hababka kooxda...
Read More "Soo noqoshada weligeed ah - Badbaadinta Madoow" »
Posted on 12. May 2022 13. May 2022 By Claudia Wendt	No Comments Ciyaaraha Epopeia
Ciyaaraha Epopeia waa istuudiyaha ciyaaraha Brazil kaas oo qabanayay ciyaaraha ilaa 2010. Mid ka mid ah ciyaarahooda waa Xisbiga Mega Monster Party. Ciyaaraha Epopeia Gaucho iyo Koritaanka Grassland Outland IIN Mega Monster Party Goroons tag shabakada horumariyaha
Wallace iyo Gromit
Posted on 12. May 2022 13. May 2022 By Claudia Wendt	No Comments Wallace iyo Gromit
Maqaalkan waxaan ku siinayaa dulmar ku saabsan ciyaaraha Wallace iyo Gromit. Wallace iyo Gromit Wallace iyo Gromit waa jilayaasha taxanaha noole ee Nick Park ee isla magaca. Wuxuu la soo saaray shirkaddiisa Aardman Animations. Tirooyinka waxaa laga soo qaabeeyay Plasitlin oo ku yaal fiimyo wareeg ah. Animations-ka waxaa la sameeyay iyadoo la adeegsanayo farsamada joojinta dhaqdhaqaaqa ee loo yaqaan dhoobada. Wallace…
Read More "Wallace iyo Gromit" »
1 2 ... 155 soo socda
Isticmaalayaasha Maanta: 18
Isticmaalayaasha Shalay: 107
Wadarta aragtida: 56942
Goobaha ciyaaraha lagu taliyay (5)
Ciyaaraha iyo gabayada (1.335)
Ciyaaraha guddiga (4)
Geeska Ciyaaraha Lumay (2)
ciyaaraha muusiga (1)
Wax qarsoon (4)
ciyaarta sameeysa (60)
Barnaamijyada ciyaarta (97)
Deminta waa la sameeyay! Booqashooyinkaaga mareegahan mar dambe laguma qori doono falanqaynta shabakadda. Fadlan ogow in buskudka deactivation ee Matomo ee degelkan sidoo kale la tirtiri doono haddii aad ka saarto cookies-ka ku kaydsan biraawsarkaaga. Intaa waxaa dheer, haddii aad isticmaasho kombuyuutar ama browser kale, waxaad u baahan doontaa inaad mar kale marto nidaamka ka bixista.
Waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad ka hortagto ficillada aad halkan ku sameyso in la lafaguro oo la isku xiro. Tani waxay ilaalin doontaa sirtaada, laakiin waxay sidoo kale ka hor istaagi doontaa milkiilaha inuu wax ka barto ficiladaada oo ay horumariso isticmaalka adiga iyo isticmaalayaasha kale.
Booqashadaada degelkan waxaa hadda duubaya falanqaynta shabakadda Matomo. Ha doorin sanduuqa hubinta si aad uga baxdo Booqashadaada degelkan hadda laguma diiwaangelin falanqaynta shabakadda Matomo. Daar sanduuqa hubinta si aad u gashid
Shaqada ka bixista raadraaca waxay u baahan tahay cookies-ka firfircoon.
Ma waxaad raadineysaa ciyaar?
Action Adventure Capcom Daedalic Madadaalada Daedalic Deck 13 Devcom 2020 Geeska Ciyaaraha Lumay Qolka baxsiga Ciyaaraha 2019 Ciyaaraha 2020 Ciyaaraha 2021 GB GBA GBC Ciyaaraha Haemimont Ciyaaraha Haiku xanaaqay Bood & Orod Warbaahinta Kalypso Man ahee N64 NDS NES Nintendo DS Nintendo Switch PC PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PSP naadware Ciyaarta tartanka RPG Sega Shooter SNES xeeladaha Switch Midnimada Novel Visual Xbox Xbox One
2D iftiinka iyo hooska Midnimada 13 views
Waa maxay Sprite Renderer? 12 views
Horumarka Dagaalka Ace 9 views
Hard West 2: Siideynta 2022 8 views
Hal qayb oo ka mid ah White Owls Inc. 8 views
Baxsashada: Jidka Wadada 7 views
Qabriga Raider Legend 7 views
Xirsi Ho 7 views
2022 karaa (36)
Febraayo 2022 (71)
Diisambar 2021 (60)
Juun 2021 (60)
2021 karaa (48)
Febraayo 2021 (82)
Diisambar 2020 (56)
Juun 2020 (50)
2020 karaa (60)
Borderlands Ciyaaraha iyo gabayada
2D iftiinka iyo hooska Midnimada Barnaamijyada ciyaarta
James Bond - 007 - Adduunku kuma filna Action
Xirfadlaha Ciyaaraha iyo gabayada
Cudurka Shisheeyaha Ciyaaraha iyo gabayada
Degayaasha 3 Ciyaaraha iyo gabayada
Waddooyinka Rage 4 Ciyaaraha iyo gabayada
Xuquuqda daabacaadda © 2022 Ciyaaraha iyo Gabayada.
Waxaa suuro galiyay Mawduuca Madow ee PressBook
Websaydaan wuxuu isticmaalaa cookies si loo hagaajiyo khibrada isticmaalaha. Waxaad ku damin kartaa cookies -kan halkan.
Websaydkani waxay isticmaashaa cookies si loo wanaajiyo khibradaada Waxaan kugula talinaynaa in aad arrintaan saxan tahay, laakiin waad ka-bixi kartaa haddii aad rabto. Dejinta cookieAQBALO / AQBAL
Dejinta asturnaanta iyo cookie
Macluumaadka kukiyada / dulmar guud
Mareegtan waxay isticmaashaa cookies si ay u horumariso shaqada iyo khibrada isticmaalaha. Waxaa jira laba nooc oo cookies ah: Kuwa lagama maarmaanka ah waxaa lagu kaydiyaa browserka waxayna muhiim u yihiin shaqada saxda ah ee shabakada. Kukiyada aan loo baahnayn ama qolo saddexaad ee loo isticmaalo waxaa loo isticmaalaa falanqaynta oo na tusay isticmaalka website this. Kukiyadaas sidoo kale waxaa lagu kaydiyaa browserka, laakiin waa haddii aad si cad u ogolaato. Kuwa soo socda, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad mamnuucdo cookies-ka dhinac saddexaad. Deminta cookies-kan waxay saameyn kartaa hab-dhaqanka mareegaha.
AWSALBCORS 7 maalmood Buskudkaan waxaa maamula Amazon Web Services waxaana loo isticmaalaa isku dheelitirka culeyska.
macmiil_id 10 sano Buskudkan waxa loo isticmaalaa gudbinta macluumaadka xaqiijinta.
cookielawinfo-checkbox-xayaysiis sano 1 Waxaa dejiyay plugin-ka Oggolaanshaha Kukiyada ee GDPR, buskudkan waxa loo isticmaalaa in lagu duubo oggolaanshaha isticmaale ee cookies-ka qaybta "Xayeysiinta".
cookielawinfo-checkbox-gorfaynta sano 1 Waxaa dejiyay plugin-ka Oggolaanshaha Kukiyada ee GDPR, buskudkan waxa loo isticmaalaa in lagu duubo oggolaanshaha isticmaale ee cookies-ka qaybta "Analytics" .
cookielawinfo-checkbox-shaqeynaya sano 1 Buskudka waxa dejiyay bakhtiyaarka Oggolaanshaha Kukiyada ee GDPR si loo diiwaangeliyo oggolaanshaha isticmaale ee cookies-ka qaybta "Functional".
cookielawinfo-checkbox-Waa lama huraan sano 1 Waxaa dejiyay plugin-ka Oggolaanshaha Kukiyada ee GDPR, buskudkan waxa loo isticmaalaa in lagu duubo oggolaanshaha isticmaale ee cookies-ka qaybta "Lama huraanka ah".
cookielawinfo-checkbox-non-aan loo baahnayn sano 1 Waxaa dejiyay plugin-ka Oggolaanshaha Kukiyada ee GDPR, buskudkan waxa loo isticmaalaa in lagu duubo oggolaanshaha isticmaale ee cookies-ka qaybta "Aan loo baahnayn".
cookielawinfo-checkbox-kuwa kale sano 1 Waxaa dejiyay plugin-ka Oggolaanshaha Kukiyada ee GDPR, buskudkan waxa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo oggolaanshaha isticmaale ee cookies-ka qaybta "Kuwa kale".
cookielawinfo-checkbox-waxqabadka sano 1 Waxaa dejiyay plugin-ka Oggolaanshaha Kukiyada ee GDPR, buskudkan waxa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo oggolaanshaha isticmaale ee cookies-ka qaybta "Performance".
Oggolaanshaha CookieLawInfo sano 1 Wuxuu diiwaangeliyaa badhanka caadiga ah ee qaybta u dhiganta & heerka CCPA. Waxay ka shaqeysaa oo kaliya iskuduwidda buskudka aasaasiga ah.
ezCMPCCS sano 1 Ezoic waxa ay u dejisaa buskudkan si uu ula socdo marka isticmaaluhu ogolaado cookies-ka.
Dhammaan cookies-ka aan si toos ah lagamamaarmaan u ahayn in degelku si sax ah u shaqeeyo oo loo isticmaalo in lagu ururiyo xogta isticmaalaha shakhsi ahaaneed iyada oo loo marayo falanqaynta, xayaysiinta, ama waxyaabaha kale ee ku dhex jira waxaa loo yaqaan cookies-ka aan loo baahnayn. Waa lama huraan in la helo oggolaanshaha isticmaalaha ka hor inta aan la isticmaalin cookies-kan. Haddii ogolaanshaha isticmaalka cookies-ka aan la bixin, lama isticmaali doono oo kaliya cookies-ka lagama maarmaanka ah ayaa shaqeyn doona.
__qca 1 sano 26 maalmood Kukiga __qca waxa uu la xidhiidhaa Quantcast. Xogtan qarsoodiga ah waxay naga caawinaysaa inaan si wanaagsan u fahanno baahiyaha isticmaalayaasha oo aan u habaynno mareegaha si waafaqsan.
euds fadhiga Buskudkan waxa dejiyay Shidaalka Rocket ee xayaysiis la beegsaday si isticmaalayaasha loo tuso xayaysiimaha khuseeya.
i 10 sano Buskudkan waxa dejiyay OpenX si uu u duubo xogta isticmaalaha aan la magacaabin, sida ciwaanka IP-ga, goobta juqraafiyeed, mareegaha la booqday, xayaysiisyada uu gujiyay isticmaaluhu iwm, ee xayaysiisyada khuseeya
mc 1 sano 1 bil Quantserve waxay dejisaa buskudka mc si uu si qarsoodi ah ula socdo dhaqanka isticmaale ee mareegaha.
ruud 1 sano 24 maalmood Buskudka rud waxaa iska leh Rocketfuel wuxuuna diiwangeliyaa xogta isticmaalaha, sida ciwaanka IP-ga, goobta, iwm. iyadoo ujeedadu tahay wanaajinta bandhiga xayeysiiska.
ruds fadhiga Buskudkaan waxaa iska leh Rocketfuel wuxuuna ururiyaa xogta isticmaalaha qarsoodiga ah si loo beegsado daawadayaasha oo uu gaarsiiyo xayeysiis shaqsiyeed.
yt.innertube:: nextId marna Buskutkan, oo ay dejisay YouTube, waxa uu diiwaangelinayaa aqoonsi gaar ah si uu u kaydiyo xogta waxa fiidiyowyada YouTube-ka isticmaaluhu arkay.
yt.innertube::codsiyada marna Buskutkan, oo ay dejisay YouTube, waxa uu diiwaangelinayaa aqoonsi gaar ah si uu u kaydiyo xogta waxa fiidiyowyada YouTube-ka isticmaaluhu arkay.
Kukiyada shaqaynta ayaa loo adeegsadaa si loo suurtogeliyo hawlaha qaarkood sida wadaaga macluumaadka goobaha warbaahinta bulshada, ururinta jawaab celinta iyo hawlaha kale ee dhinac saddexaad.
__cf_bm 30 daqiiqo Buskudkan, ay dejisay Cloudflare, waxa loo isticmaalaa in lagu taageero Cloudflare Bot Management.
pl_luqad sano 1 Buskudka pll _language waxa isticmaala Polylang si uu u xasuusto luqadda uu adeegsaduhu doortay marka uu ku soo laabanayo mareegaha, iyo sidoo kale in uu helo macluumaadka luqadda marka aan si kale loo heli karin.
Kukiyada falanqaynta waxqabadka waxaa loo isticmaalaa in lagu falanqeeyo oo loo fahmo dhinacyada muhiimka ah ee waxqabadka. Tani waxay kaa caawinaysaa in ay si joogto ah u wanaajiso mareegaha oo sidaas awgeed u soo bandhigta booqdayaasha khibrad isticmaale oo wanaagsan.
AWSLB 7 maalmood AWSALB waa buskudka culayska culeyska arjiga ee ay dejisay Adeegga Shabakadda Amazon si uu kulanka ugu sawiro bartilmaameedka.
ugud 7 sano Buskudka ezds waxa dejiyay bixiyaha Ezoic, waxaana loo istcimaalaa kaydinta cabbirka pixel ee browserka isticmaalaha, si loo shakhsiyeeyo khibrada isticmaalaha oo loo hubiyo in nuxurku ku habboon yahay.
ezoab_1034 saacadood 2 Ezoic waxa ay isticmaashaa buskudkan si ay u kala qaybiso tijaabinta sifooyin kala duwan iyo shaqayntooda.
ezohw 7 sano Buskudka ezohw waxaa dejiyay bixiyaha Ezoic, waxaana loo adeegsadaa kaydinta cabbirka pixel ee browserka isticmaalaha, si loo shakhsiyeeyo khibradaha isticmaalaha oo loo hubiyo in nuxurku ku habboon yahay.
ymex sano 1 Yandex ayaa u dejisay buskudkan si uu u ururiyo macluumaadka ku saabsan hab-dhaqanka isticmaale ee mareegaha. Macluumaadkan waxaa loo isticmaalaa falanqaynta mareegaha iyo hagaajinta mareegaha.
yuidss sano 1 Yandex waxa ay ku kaydisaa buskudkan browserka isticmaalaha si loo aqoonsado booqdaha.
Kukiyada falanqaynta ayaa loo adeegsadaa si loo fahmo sida booqdayaashu ula falgalaan mareegahan. Kukiyadani waxay caawiyaan in la helo macluumaadka ku saabsan tirada dadka soo booqda, heerka booqashada (tirada booqdayaasha ee booqda mareegaha oo isla markiiba ka taga), waddanka uu ka soo jeedo booqdaha, iwm.
__gaduud 1 sano 24 maalmood Buskudka __gads, oo ay dejisay Google, ayaa lagu kaydiyaa hoosta DoubleClick domain waxayna la socotaa tirada jeer ee isticmaalayaashu ay arkaan xayeysiis, waxay cabbirtaa guusha ololaha oo waxay xisaabisaa dakhligiisa. Buskudkan waxa kaliya oo laga akhrin karaa bogga lagu rakibay mana la socon doono wax xog ah marka laga dhex dhex mushaaxo boggaga kale.
_gu 1 bishii Buskudkan waxa dejiyay bixiyaha Getsitecontrol. Buskudkaan waxa loo isticmaalaa in lagu kala saaro isticmaalayaasha.
_ym_d sano 1 Yandex ayaa u dejisay buskudkan si uu u kaydiyo taariikhda isticmaalayaasha fadhiga ugu horreeya ee goobta.
_ym_isad saacadood 20 Yandex ayaa u dejisay buskudkan si uu u go'aamiyo haddii booqde leeyahay xannibayaal xayaysiis ah.
_ym_uid sano 1 Yandex ayaa u dejisay buskudkan si uu u garto isticmaalayaasha goobta.
eu 1 sano 24 maalmood Buskudkaan waxaa iska leh Rocketfuel wuxuuna ururiyaa xogta isticmaalaha qarsoodiga ah si loo beegsado daawadayaasha oo uu gaarsiiyo xayeysiis shaqsiyeed.
ezepvv maalin 1 Buskudkan waxa dejiyay bixiyaha Ezoic si uu ula socdo waxa bogag isticmaaluhu arkay.
ezoadgid_1034 30 daqiiqo Ezoic waxay isticmaashaa buskudkan si ay ugu duubto aqoonsiga da'da isticmaalaha iyo qaybta jinsiga.
ezoref_1034 saacadood 2 Ezoic waxa uu u isticmaala buskudkan si uu u kaydiyo barta tixraaca, tusaale ahaan mareegaha uu isticmaaluhu ku jiray, ka hor inta aanu iman mareegaha hadda jira.
ezouspva fadhiga Buskudka ezouspva waxaa dejiyay bixiyaha Ezoic waxaana loo istcmaalaa in lagu raadraaco tirada boggag isticmaaluhu soo booqday mar walba.
ezouspvv fadhiga Buskudka ezouspvv waxaa dejiyay bixiyaha Ezoic waxaana loo isticmaalaa si loola socdo tirada boggaga isticmaaluhu soo booqday mar walba.
UserID1 3 bilood Buskudkaan waxaa dejiyay ADITION Technologies AG, sida aqoonsi gaar ah oo qarsoodi ah booqdaha mareegaha, si loo aqoonsado isticmaalayaasha gaarka ah ee kalfadhiyo badan.
yabs-sid fadhiga Yandex ayaa u dejisay buskudkan si uu u kaydiyo aqoonsiga fadhiga
yandexuud sano 1 Yandex ayaa u dejisay buskudkan si uu u garto isticmaalayaasha goobta.
Kukiyada xayaysiinta ayaa loo adeegsadaa si loo tuso booqdayaasha xayaysiisyada iyo ololayaasha suuqgeyneed ee khuseeya. Kukiyadani waxay la socdaan booqdayaasha markay booqdaan mareegaha oo ururiyaan macluumaadka u oggolaanaya inay u adeegaan xayaysiisyada gaarka ah.
Kukiyada kale ee aan la kala saarin waxaa ka mid ah kuwa la falanqeeyay balse aan weli qayb loo magacaabin.
_auid sano 1 Sharaxaad lama hayo.
firfircoon_template:: 332619 2 maalmood
Sharaxaad ma leh
sii dayn fadhiga Sharaxaad lama hayo.
BACKENDID fadhiga Sharaxaad lama hayo.
dspid sano 1 Sharaxaad lama hayo.
ezoab_332619 saacadood 2 Sharaxaad ma leh
ezoadgid_332619 30 daqiiqo Sharaxaad ma leh
ezopvc_332619 30 daqiiqo Sharaxaad ma leh
ezoref_332619 saacadood 2 Sharaxaad ma leh
ezosuibasgeneris-1 sano 1 Sharaxaad ma leh
ezovid_332619 30 daqiiqo Sharaxaad ma leh
ezovuuid_332619 30 daqiiqo Sharaxaad ma leh
ezovuuidtime_332619 2 maalmood Sharaxaad ma leh
ezux_lpl_332619 sano 1 Sharaxaad ma leh
f_001 3 bilood Sharaxaad ma leh
g_001 maalin 1 Sharaxaad ma leh
xikmad 1 bishii Sharaxaad lama hayo.
lp_332619 30 daqiiqo Sharaxaad ma leh
mts_id 9 sano 10 bilood 8 maalmood Sharaxaad lama hayo.
mts_id_last_sync 9 sano 10 bilood 8 maalmood Sharaxaad lama hayo.
pvc_booqashada sano 1 Buskudkan waxa sameeyay counter-views-counter. Buskudkan waxa loo isticmaalaa in lagu tiriyo tirada booqashooyinka boostada.Waxa kale oo ay ka caawisaa ka hortagga soo noqnoqoshada aragtida booqde.
srp fadhiga Sharaxaad lama hayo.
userId 5 bilood 27 maalmood Sharaxaad ma leh
Kukiyada daruuriga ah ayaa lagama maarmaan u ah mareegaha inuu si habboon u shaqeeyo. Qaybtani waxay ka kooban tahay oo keliya cookies oo awood u siisa shaqooyinka aasaasiga ah iyo shaqooyinka amniga ee mareegaha. Kukiyadaani ma kaydiyaan wax xog shakhsi ah.